Kwimo yamapolisa ufuna ukuvalwa kokufotwa kwamapolisa kunye nababoneleli "boncedo": UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-6 Disemba 2019	• 9 Comments
Kwiphondo lase China iSinkiang kuhlala iqela labemi elibizwa ngokuba yi-Uyghurs. Ngokwesiqhelo bangamaSilamsi ngokwendalo kwaye ilizwe laseTshayina lingathanda ukukubona ngokwahlukileyo oku. Imifanekiso esiyibonayo yeyabantu abaphikisayo kunye neqela labanqolobi elineefoto kunye neevidiyo ezifanayo nezo ze-IS. Lixesha lokuba sijongane nenyaniso yokuba oorhulumente njengabanye akekho onakho ukuxhasa ngemali amaqela amaqela obugrogrisi ngokwabo kunye nokwenza amalungiselelo enkohliso ngokwabo. Unokwenza oko kunye namaqabane aphesheya, ukwenzela ukuba uququzelele imvukelo efuna ukuba ungenelele.
Uqhanqalazo eHong Kong ke luhlobo oluhle kakhulu kurhulumente waseTshayina ukuze akwazi ukungenelela ngamandla kunye nokumisela urhulumente wamapolisa kwisitayela sase-Uighur. Kule meko ayingobanqolobi abangamaSilamsi, kodwa kungabhekiswa e-US ozokufaka phakathi kwabaqhankqalazi ezitratweni zaseHong Kong. Kulabo bacinga ukuba zisekho iintshaba kwinqanaba lehlabathi, phosa nje loo mbono. Onke amazwe asebenza kunye kwihlabathi liphela ukwazisa urhulumente. E-Yurophu nase-US yindawo yokubaleka ehamba nabalwi abanokwenzeka be-IS apha ngezantsi, eHong Kong ngabatheleli baseMelika, kwiphondo laseSinkiang yayilamaSilamsi. Ungenelelo olunzima sisiphumo esikufunayo, isoyikiso okanye imvukelo enemibala (CIA Gene Sharp indlela) yindlela eya kuyo.
Funda kwincwadi yam entsha ukuba onke amazwe asebenza njani kunye kwihlabathi liphela kwiskripthi esifanayo sobuyali emva kwezigcawu.
Ke ukuba ujonga ingxelo engezantsi, ungayibona ukuba ichazwa njani indlela ezimbi ngayo izinto eTshayina, kodwa siyayityeshela into yokuba sisendleleni eya kwimeko yamapolisa eNtshona. Indlela ecothayo yayiyeye soyikiso kunye nolwaphulo-mthetho olukhulayo (ngohlobo lwe ulwaphulo-mthetho olusebenzayo njengezo zeMocro Mafia kunye nabaphangi ababulala uHineken). Ngalo nto onokuthi wazise zonke iintlobo zomthetho oqheleke ungathandeki, kodwa ngokudala iimfuno ngokwakho, uyonyusa indlela yokwamkela abantu. Ngombulelo ekusebenzeni kukaWillem Holleeder, ngoku sinomthetho ovumela ukuba wonke umntu abeke ityala ngolwaphulo-mthetho kwaye "alingqina" ngqina lesithsaba. Ngokubeka abameli njengamaxhoba, unokwenza ukuba iqela lingavuleki. Kwenzeka into efanayo nakwintatheli yombuso. Cofa kwikhonkco eliluhlaza okwesibhakabhaka ngolwazi oluneenkcukacha.
Nangona kunjalo ukunika i-state-kick yaseburhulumenteni ukuba ufuna ukuqala, udinga ukungazinzi kuluntu. E-France sele iphumelele ngokupheleleyo i-vests etyheli. Kulula ukufumana abanye amajoni asuka kwelinye lamazwe e-EU kunye nokuwafaka kwiimpahla zasesidlangalaleni ukuze abenze ubundlobongela nge-ephu ephuzi. I-kickstart emnandi yamazwe anjengeNgilane neNetherlands yindibaniselwano yengxinano kunye nomjelo weembaleki. Zonke iifosisi ngoku zikwiigs ezahlukeneyo zomgubo. Umongameli Erdogan waseTurkey uyekelela ngandlela thile namahlakani aseYurophu, kuba abamxhasi ekuxhaseni ngemali ukwamkelwa kwababaleki kwaye abamamkeli nakwi-EU. Kuya kufuneka avule kuphela impompo yokubalekela kwaye apha. Ingxoxo yeBrexit ye-wick enokubakho kwi-powder keg yoqoqosho; ecaleni kwe ukudodobala kwezoqoqosho oko kuyakuvuthulula kuvela e-US.
Ukuba uqoqosho luyadilika kwaye inkampu yezopolitiko enamaphiko amele ukuba igxekwe, ubeke isiseko sengxwabangxwaba enkulu. Ukusuka kweso siphithiphithi kulula kakhulu ukungenelela kanzima. I-alibi eyongezelelweyo eyongezelelweyo yakhiwe kwiminyaka yamuva nje ngokusebenzisa imeko yemozulu e-hyped. Uloyiko lokuba umhlaba uya kuphela ngaphakathi kwe-12 iminyaka ilingana nomthungo kwi-ajenda ye-UN 2030. La manyathelo emozulu aya komeleza umnxeba wolawulo lobuzwilakhe olungqongqo kwaye akhokelele ku ubuzwilakhe bobuzwilakhe bobuzwilakhe (ngokuqinisekileyo phantsi kwengubo yedemokhrasi). Ndiyakufunda eli nqaku kwakhona ukufumana oko kuchaziwe ngokweenkcukacha.
Ilizwe lethu ligcwele iikhamera. Umthetho ulungiselelwe ukususa bonke abachasene noluntu phantsi kwesizathu "sokusebenza kwengqondo" okanye "udidekile." I ii-psycholances zikulungele ukuqhuba kwaye zithathe abantu baye kwiinkampu "zokhathalelo". Ungayithelekisa le nto ibizwa ngokuba 'luqeqesho' kwividiyo engezantsi. Abantu abakholelwa ukuba akukho nto iphosakeleyo ngemozulu okanye abantu abachasene ne-EU (abo banamaphiko asebusuku abanokuchongwa ukuba babe noxanduva lokudodobala kwezoqoqosho ngelo xesha) bahlupheka ngenxa yokukhohlisa kwaye kufuneka baphathwe njengezenzo zokuthabathela amanyathelo ngenyameko ukuze hayi bo kwakhona kwengqondo yiba. Kwaye ungoyiki ukuthetha namapolisa okanye "oonontlalontle" bengqondo ukufota xa amaqela aphikisayo eshenxisiwe.
Abantu aboyikayo ukuba baya kubanjwa banokuba neengxaki ezilandelwayo kwaye bafuna unyango lokuthintela. Emva kwayo yonke loo nto, kufuneka sisonge imozulu.
Saziswa ngokuzithoba kwaye sitshabalalise isimo samapolisa sase China. I-American (Fed) kunye ne-European Central Bank sele zilungiselele ubukomanisi ngokunika iinkampani ezinkulu ezishicilelweyo imali phantse inzalo ye-zero, ukuze zikwazi ukuthenga ezabo izabelo. Oku kugcine amaxabiso esitokhwe aphezulu kakhulu. Ingxaki yezoqoqosho ingatyalwa kwezihlangu zilungileyo ngokusebenzisa imfazwe yorhwebo engaphumelelanga kunye nengxoxo kaBrexit, lo gama eyona nto ibangela ityala liphezulu. Xa zonke iinkampani ezinkulu sele zithengile izabelo zazo kunye nokushayisana kwintengiso yesitokhwe, sinengxaki yokufuneka sazise inkqubo entsha yezezimali (ukulandelela i-crypto) kwaye iinkampani ezinkulu zinokwenziwa zikarhulumente. Ke sikwimodeli yobukomanisi, yeyiphi yobungxowankulu indlela smart nikelwe.
Uludwe lwekhonkco lovimba: ypsilon.org, telegraaf.nl, alt-market.com
tags: Iikhamera, iTshayina, IsiTshayina. iphondo, Unxibelelwano, eziziimbalasane, iinkampu zemfundo, Hong Kong, I-Uighurs, urhulumente wamapolisa, loyiko, magorha
6 Disemba 2019 kwi-14: 17
Iqela eliphikisayo elilawulayo lihlala lisebenza ngenjongo yokufaka abantu kumnatha wokhuseleko emva koko bavuthulule izinto. Jonga indlela uAlex Jones asibeka ngayo isiseko senkcazo ye-psyhcose. Ukuba ubambelela "kwi -thiyoriyano yetyhefu" ke ngoko, unombulelo ongazenzisiyo kuAlex Jones:
6 Disemba 2019 kwi-14: 27
Sele silumkisiwe ... kwaye abaninzi abasafuni kuyibona. Abanye bakhetha ukusebenza kwicala lenkqubo ukuze bakhuseleke.
I-NewWind wabhala wathi:
5 Januwari 2020 kwi-20: 23
Ugqwetha alunalo icala "elikhuselekileyo", nokuba lungaphezulu!
Yinto ye-psychopaths ejongene nokujongana.
Kukho intsomi engaqhelekanga yokuba "urhulumente" okanye "urhulumente" ukwabizwa ngokuba "ngabo" abaqhuba urhulumente wamapolisa. Yile nto 'urhulumente' afuna ukuyikholelwa. Inyani, nangona kunjalo, kukuba ayizizo 'zabo', kodwa ngumzala wakho, umntakwenu okanye udadewenu, unyana okanye intombi, loo ntsapho intle ekugcineni kwesitalato kunye nenja enhle.
Ngabantu abangazithembanga ngoku abakhala ngeyunifom kumabonwakude ukuba 'banako' nzima. Kodwa sithe sakuphakama kuloo yunifom saza saxhoma izixhobo, yonke loo nto iyakhululwa kwaye umntu ongenalo izixhobo, umntu ongaqeqeshwayo uhlukunyeziwe kwaye ubulawa ... ubukhulu becala ngenxa yenkanuko emsulwa. "Zizo" zikhethwe kwi-IQ ubuncinci ezingama-83 kwaye ingama-93. Lilo iqela elinezona ndawo 'zibalaseleyo' (zengqondo). Umkhosi waseMelika kudala ukuphanda oku ukusukela ngo-1919 ekuzingeleni kwabo inyama ye-cannon.
Okumangalisa ngokulinganayo yinto yokuba wonke umntu, kubandakanya namapolisa ngokwabo, basaxoxa 'ngombala oblowu esitratweni'. Kwiminyaka embalwa edluleyo '' babekwa kwakhona ebumnyameni othandekayo. Ngokucacileyo, akukho mntu waziyo ukuba kutheni emnyama kwathatyathwa indawo eluhlaza okwesibhakabhaka emva kwe-WWII, kwaye leliphi ilungu le-NSB (umhlobo we-zur Lippe B) lavunyelwa ukubonelela ngeyunifomu.
Ayindimangalisi kwaphela into yokuba ungaze uve nantoni na evela kwisangqa samaJuda…. ukuba "luhlaza" ngokuyintloko yayihambelana naleya. Abasebenzi abalungileyo ngoku abazibiza ngokuba 'ngabukele kwaye bayasebenziseka' babefana ngexesha lokuhlala apho 'babesebenza ngenkuthalo ebumnyameni besenza uhlaselo lokunceda abahlali ngokusemandleni. AmaYuda angabhala iincwadi ngayo!
Kwinkulungwane edluleyo, bangama-175.000.000, 262.000.000 abantu abafayo ngenxa yemfazwe. Ukongeza, 'bona' bakwano-XNUMX (https://meervrijheid.nl/index.php?pagina=74) babulale 'oorhulumente' babo. Elo nani ke liphezulu ngama-50% kuzo zonke iimfazwe ezidibeneyo.
'Baye bafunda kwiWW II, kodwa iNuremberg Trials bafuna ngokwenene ukubathintela'…. Izinto zelixesha zinxiba iibalaclavas !! kuba 'abanakuwenza' umsebenzi wabo 'ngenye indlela.
Yenza isifuba sakho simanzi 🙁
6 Disemba 2019 kwi-15: 33
UJimmy Lai ngumxhasi wamawaka ezigidi okanye iphulo lokuxhasa ikamva elise-Hong Kong
Uqhankqalazo lwentando yesininzi.
6 Disemba 2019 kwi-19: 51
Martin, luthini umbono wethemba lehlabathi, awuqondi ukuba ukutshintsha kwemozulu kunegalelo kuqoqosho lwezoqoqosho kunye nokudodobala kwemali okuzayo?
UChristine Lagarde ukwenze kwacaca gca ukuba ukutshintsha kwemozulu kuya kuba yinto ephambili ngexesha lokusebenza kwakhe njengomongameli we-ECB, ecebisa ukuba ibhanki ephakathi ingasebenzisa umgaqo-nkqubo wemali ukuxhasa imeko-ehambelana nobushushu.
7 Disemba 2019 kwi-19: 10
Iifolokhwe zingahamba ngqo kwiiflegi ezibomvu ukukhetha ubuchuku. Le yimeko yomsebenzi owothusayo / wokunyusa.
8 Disemba 2019 kwi-15: 52
Ngokubanzi ndivumelana nawe ukuba yeyiphi na indlela ehamba ngayo, kodwa ungaboni nje ukuba ilungelo lingagxekwa ngokukhawuleza kangakanani kwintlekele / yengozi ezayo. Ngakwesokunene, phantse bonke oorhulumente bagcinwe ngaphandle iminyaka, kwaye ukuba bayakwazi ukungena, benziwa beqhutywa ziqhinga ezingathandekiyo zedemokrasi (Lega e-Italiya; FPÖ Austria). Zonke i-AfD, i-PVV, i-FVD, i-RN, njlnjl. Onke amaqela achasiwe ngumyalelo osekiweyo kwaye anyanzeliswa ukuba abambe mva kumandla
Ke banokugxekwa njani ilungelo ukuba bayaphikisana phantse kuyo yonke indawo (ngaphandle kwase-US, kwaye andizukubiza Boris Johnson ilungelo)? Ndingathanda ukuba ndicinge ukuba emva kwenkxwaleko abahlali bagxeka abalawuli bangoku (abasekhohlo-okhululekileyo, abaluhlaza kunye nabasekhohlileyo abangamaKristu), bavote bavote banelungelo lobuzwe.
Unokufumana imeko apho uya kuthi ekugqibeleni uzinze kunye nelungelo. Oku kunokuhamba kunye 'nokubiyela' okungakumbi ngamajelo eendaba, kwaye kunokwenzeka ngezehlo 'ezingeyonyani', ezinje ngohlaselo olukhulu olubizwa ngokuba 'kukuphelela kwephiko', umzekelo, amaziko aseburhulumenteni, ii-AZC, ii-mosque, njl. / kungakhathalelwanga-ukuphakanyiswa okukhulu okuphezulu kunokuqhekezwa, kuze emva koko kusetyenziselwe ukungenelela ngqongqo kakhulu ukuthethelela ubuzwilakhe kunye ne-EU superstate.
Umbuzo omkhulu kukuba bayaphumelela na ukuhambisa udushe, uloyiko kunye nesiphithiphithi esiya kuphakama. Phantse akunakwenzeka ukubikezela kwangaphambili ukuba izigidi zabantu ziya kusabela njani ngexesha imeko yabo yokuphila ingagungqi. Ngaba ngenene banamathela 'kusindiso' oluboniswe ngabaphathi abakhoyo ngoku, okanye akunjalo, kwaye ngamaziko karhulumente, njl njl. Andiqinisekanga ke ukuba yonke into izakuhamba ngokwezona meko zintle zacwangciswa ngoososayensi behlabathi.
8 Disemba 2019 kwi-17: 19
Ukuncamathisela ukusuka ekunene kwenziwa ngokudibanisa zonke ezo zimvo zikwimo yeestigma zobuxoki kuloo nto ilapha ngasekunene. Isimo sengqondo esinjalo sobuxoki, umzekelo, 'ngabachasi bemozulu' kunye 'nabacinga ngeyelenqe'.
Ndicacisile ukuba ngokuqhubeka kweli nqaku:
Kuyanceda ukufunda elo nqaku nje.
Ndiyazi ukuba usayixhasa ngokuqinileyo ipolitiki efanelekileyo kwisiza sakho, kodwa ngokokuchatshazelwa, kubalulekile ukubona ngalomhlaba ubonakalayo wamandla asekhohlo. Ukuba - njengoko ubonisile- uyifundile incwadi yam, kufanele ukuba icace gca kuloo nto. Umbuzo kuphela kukuba uyakholelwa na ukuba inkcaso inokulungelelaniswa okanye hayi; ngamafutshane, nokuba 'amandla' alawula ngokupheleleyo na ngasekhohlo nakwilungelo lezopolitiko, imidiya kunye nabezindaba zentlalo.
8 Disemba 2019 kwi-17: 23
U-Boris Johnson unokunxulunyaniswa nelungelo ngombono wokuba uyityhala lokutyhalalela kwinqanaba likaBrexit; enye yemikhonto ukusuka ngasekunene.
« Yazi imbali ukuqonda i-ajenda ye-UN 2030
Ingcinezelo ebakho ebantwaneni inkulu! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.832.779